Ebe 5 gara ileta na njem Costa Rica | Akụkọ Njem
A na-ekwu na mgbe Christopher Columbus rutere na 1502 na Uvita Island, nke dị nanị kilomita atọ site na Puerto Limón, ọ tụrụ ya n'anya na ubi mkpụrụ osisi Costa Rican mara mma na ịba ụba nke ihe ịchọ mma nke ndị bi na ya. Ikekwe nke ahụ bụ ihe kpatara ọmarịcha ụgbọ mmiri na ndị ọzọ nwere mmeri na Spain ji aha Costa Rica mee ebe a.
Agbanyeghị, ma e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ dị na Latin America dịka Mexico ma ọ bụ Colombia, Costa Rica enweghị ọtụtụ ọla dị oke ọnụ ahịa, agbanyeghị na o nwere ọtụtụ ihe ndị na-adọrọ mmasị nke ụwa taa mere ka agwaetiti ahụ bụrụ ebe kachasị mkpa maka ndị hụrụ ecotourism n'anya.
2 Costa Rica, ebe kachasị amasị ndị surfers
3 Museumlọ ihe nkiri Gold na San José
4 Ogige Ntụrụndụ Tortuguero
5 Ala ugwu mgbawa
Ma ọ bụ n’ụkwụ ma ọ bụ jiri ụgbọ mmiri, ịchọta Manuel Antonio National Park bụ ihe na-atọ ụtọ. Site na otu n'ime ala ndị mara mma na Costa Rica niile, ogige ahụ nwere ájá ọcha na ahịhịa ndụ n'etiti oke ugwu. Ọ dị n'ógbè Puntarenas ma bụrụkwa obere National Park na mba ahụ.
N'ebe a, ndị njem ahụ ga-enwe ọrụ na-adịghị agwụ agwụ ha ga-eme, site na ịga ije n'okporo ụzọ ogige, gaa njem njem kayak gburugburu ụsọ oké osimiri, ịnya anyịnya ma ọ bụ ịkụ azụ. Ọbụna njem ụgbọ mmiri ndị na-elekwasị anya na dolphin, oke osimiri ma ọ bụ elele whale, dabere na oge. Ihe niile maka onye ọ bụla na Manuel Antonio.
Costa Rica, ebe kachasị amasị ndị surfers
Site na kilomita nke aja aja ọcha na nnukwu ebili mmiri, Costa Rica aghọwo otu n'ime ebe kachasị amasị ndị surfers na-eme egwuregwu a. A sị ka e kwuwe, a na-ahụta obodo a dịka ebe nke atọ kachasị ewu ewu maka sọfụfụ mgbe Hawaii na Indonesia maka oke osimiri na ebili mmiri ya, ihu igwe dị mma, mmiri ọkụ, ọnụ ahịa ezi uche na ndị enyi.
Costa Rica bụ otu n’ime mba ole na ole oké osimiri abụọ nọ naanị awa isii. Nke a na-eme ka o kwe omume igwu mmiri na Pacific mgbe ọwụwa anyanwụ wee kwụsị ụbọchị ahụ na-eme ka ebili mmiri nke Atlantic dị mgbe anyanwụ dara. Apụghị ikweta eziokwu?
Museumlọ ihe nkiri Gold na San José
Omenala, akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Costa Rica dị na San José, isi obodo nke mba ahụ. O nwere ọtụtụ saịtị nke mmasị ndị ọbịa na-eleta, dịka Katidral Metropolitan, National Theater, National Museum of Costa Rica ma ọ bụ Pre-Columbian Gold Museum, nke gosipụtara otu nchịkọta kachasị mkpa tupu oge Columbian na America jiri ọla edo karịrị otu puku nke ụmụ amaala bi na ala ndị a kpụrụ site na afọ 300 AD
San José na-eju anya nke ike nke n'okporo ámá ya na ụlọ ya ndị mara mma. Obi abụọ adịghị ya, ọ bara uru ịnọ ụbọchị ole na ole na isi obodo iji chọpụta obodo ndị mepere emepe, ọmarịcha gastronomy ya, ndụ abalị ya na nka n'okporo ámá ya.
Ogige Ntụrụndụ Tortuguero
Tortuguero bụ otu n'ime ogige ntụrụndụ mba kachasị ama ama na Costa Rica. A na-akpọkwa ya 'obere Amazon' ebe a bụ isi ihe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nest nke nduru n’akụkụ osimiri bụ isi ihe kpatara ọtụtụ ji aga Tortuguero. Agbanyeghị, na ogige a, enwekwara anụmanụ ndị ọzọ dịka enwe enwe, frogs na iguanas na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụ agụ iyi.
Kwa ụtụtụ ọ ga-ekwe omume iji anya abụọ gị hụ ha n'ụgbọ mmiri na-abanye n'ọwa mmiri na mangrove nke ogige ahụ. Na mgbakwunye, n’agbata Julaị na Ọktọba enwere njem abalị nke ga - enyere gị aka ịhụ etu mbe si si n’oké osimiri pụta wee gwupụta akwụ n’akụkụ osimiri ka ha dina nsen ha n’otu n’ime ebe dịkarịsịrị ọdụ mmiri mbe mmiri n’ụwa.
Ma Tortuguero abụghị naanị ahịhịa. N'ịbụ onye nọ na Caribbean, ọ bụ otu n'ime ógbè kachasị ukwuu nke ọdịbendị Afro-Caribbean na mba ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị bi na ya sitere na Jamaica ma na-edebe ọdịnala ya, nke mere Tortuguero ebe na-atọ ụtọ iji mata site na echiche ọdịbendị na ecotourism.
Ala ugwu mgbawa
Dịka akụkụ nke Ring of Fire na Pacific, ugwu mgbawa nke Costa Rica so na ihe ịtụnanya n'ụwa. N'agbanyeghị na ọ bụghị mba sara mbara, ọnụ ọgụgụ nke ugwu mgbawa na Costa Rica ruru 112. themfọdụ n'ime ha bụ ogige ntụrụndụ mba nke na-echebe gburugburu ebe obibi mara mma.
Otu n’ime ndị a bụ ugwu Arenal, nke a tụlere n'etiti ọkụ ọkụ ọkụ 10 kachasị arụ ọrụ n'ụwa niile site na ndị ọka mmụta sayensị n'agbanyeghị na ọ nweghị onye ga-asị na ikpe nke a site n'iche echiche udo na blanketị ikuku nke gbara ya gburugburu. Nnukwu mgba ikpeazụ nke ugwu Arenal mere na 1968 na Mmiri mmiri ya na-ekpo ọkụ ugbu a bụ otu n’ime ebe ndị na-adọrọ mmasị na mpaghara ahụ, ya na ala ndị mara mma na ihe omume dị egwu.
Enwere ọtụtụ ụlọ nkwari akụ nwere onyinye dị mkpa dị ọkụ, mana Tabacón spa bụ ihe kachasị na mpaghara La Fortuna. Nmikpu n’ime mmiri ya na-ekpo ọkụ na-aghọ ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu maka onye ọbịa ma nsụda mmiri ahụ bụ ihe na-adọrọ mmasị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Ebe 5 gara ileta na njem Costa Rica
Rozọ 3 iji mata Hells Throat na Cáceres